KUTHENI ISIHLOMELO SOKUTHINTELWA KWESITHATHU - IBHILI YAMALUNGELO
Ngexesha lokuQala kwiinkulungwane, iMicimbi yoLungiso lweSithathu
Kwaye nje, u-2020 waya esiba nzima ngakumbi. Ngethuba lokuqala ku… naphakade, abantu bayathetha ngoLungiso lweSithathu loMthetho wamaLungelo. Enkosi ku I-senator elahlekileyo, uMike Lee , ocinga ukuba imikhosi ebizelwe ukulwa abantu bethu inelungelo lokufumana amagumbi kwiihotele, sonke kufuneka simkhumbuze, kunye nolawulo, ukuba imikhosi ayingeni nje emakhaya okanye kwiihotele.
Okokuqala, unokuba ubuza ukuba loluphi ulungiso lwesithathu? Andizange ndive ngayo! Kwaye kungenxa yokuba ayisiyomtsalane njengowokuqala ngayo yonke loo nkululeko yokuthetha kunye nokuhlangana kunye nokunqula, okanye inambuzane njengowesibini ngemipu yayo. Imalunga… nekota nemikhosi. Masonwabe, huh?
Akukho joni liya kuthi, ngexesha loxolo, lahlukane kuyo nayiphi na indlu, ngaphandle kwemvume yoMnini, okanye ngexesha lemfazwe, kodwa ngendlela eya kuthi ibekwe ngumthetho.
Ngaba kulula ngokuchanekileyo? Kwaye kuyothusa. Nkqu noJohn Mulaney wenze kancinci ngayo, kuba khange ibonakale ifanelekile.
okoko uhlengahlengiso lwesi-3 lucinga ukuba ndiza kuthumela enye yezinto endizithandayo @momani amaxesha onke pic.twitter.com/t1eZewx3UD
- garrett. UMNTU LLVES MATTER (@justachemicaI) Nge-5 kaJuni 2020
ingqayi yeebhotile ibinks inyoka
Welp, kuvela ukuba xa uhlanga luphakama kuqhankqalazo lwenkqubo yobuhlanga kunye nenkohlakalo yamapolisa, kunye nemikhosi iyabizwa ukuba icinezele uqhankqalazo, olo hlengahlengiso lincinci luyinto efanelekileyo. Kodwa kuyothusa ke mhlawumbi yile nto uSenator waseRiphabhlikhi uMike Lee wase-Utah wayedideke kakhulu xa uSodolophu waseDC egxotha amajoni kwiihotele, ewe, phantsi komhla wesithathu, abanyanzelekanga ukuba babe nemikhosi yamajoni:
Ndiyaxolisa ngalo lonke ixesha ndihlekisa ngolungiso lwesithathu https://t.co/If9AECTNyO
-Sam Adams (@SamuelAAdams) Nge-5 kaJuni 2020
Ngoku, uJohn Mulaney wenze inqaku elilungileyo kwindawo ebethelelwe apha ngasentla: kutheni le iyinto yesithathu kuMthetho wamaLungelo? Kwaye kutheni umpu ungowesibini? Ukuze uziqonde zombini ezo zinto, kwaye eneneni, uninzi lweBhili yamaLungelo, kuya kufuneka ujonge umxholo owawubhalwe kuwo. Phantse lonke uhlengahlengiso kwiBhili yamaLungelo lwaluphendula ngokuthe ngqo kwizenzo zengcinezelo nakwimithetho eyanyanzelwa yiBritane eMelika ukuba igcinwe iphantsi kolawulo.
Ekukhokeleni kwi-American Revolution, i-Brits yamisela Izenzo ezinganyamezelekiyo , olwasusa ulawulo lobukoloniyali oluninzi, lwarhafisa, lwaza lwajija inkqubo yezomthetho. Kwaye kwafuneka ukuba imikhosi yase-Bhritane ihlaliswe kwaye ihlawulwe ziikoloni. Izinto ezinje ngokuqinisekisa ukuba amajoni axhobile (HAYI BASEBENZI BABUCALA), ukuba abantu bangathetha kwaye bahlangane, babe nokuvavanywa ngokufanelekileyo kwaye kungabikho mizi yabo isetshiweyo okanye ipropathi yabo ibanjiwe, babe nejaji elungileyo kwaye kungafuneki nokuba kwikota yamajoni bonke babe ngqo impendulo kwingcinezelo evela kwisithsaba-zonke ezi yayiyimpendulo kwimeko yokwenyani ababejamelene nayo.
Isihlomelo sesithathu sasihlala singumntwana-onentloko ebomvu kuMthetho oYilwayo wamaLungelo, kodwa, njengazo zonke ezinye izilungiso, wamiselwa ukuthintela urhulumente wase-US kunye namazwe ekutyibilikeni kubuzwilakhe. Kusithathe iminyaka engamakhulu aliqela, kodwa yile nto siyenzayo ngoku. Urhulumente onyanzela ikhaya labucala kunye noosomashishini kwikota yomkhosi ngexesha loxolo ayisiyiyo kwaphela, kwaye olu luhlobo lobubhanxa ooyise abasungulayo babekhathazekile ngalo.
Kuyamangalisa kwaye kufanelekile ukuba isiTshintsho sesiThathu sinyuka sibetha phantsi iTrump kunye neenkqubo zokucinezela afuna ukuziqhubela phambili. Kuhle kakhulu iziqhulo ezimangalisayo ze-nerdy kwi-Twitter ngenkcitho kaSenator Lee (ofanelwe kukugculelwa) kunye nabanye abenza ukuba uTrump njengoLindsay Graham.
Ndiyazi ukuba uLinds wayefunde kwisikolo sezomthetho, kodwa ngaba umntu othile angamcacisela ngesihlomelo sesithathu? @LindseyGrahamSC https://t.co/OZbYg3o7hF
-UkuxhathisaFeministMom (@miscdeb) Nge-5 kaJuni 2020
Uhlengahlengiso lwesithathu namhlanje pic.twitter.com/qcpYYFsxAY
-Alexander kumgama okhuselekileyo (@WolfDrinkCoffee) Nge-5 kaJuni 2020
Kwaye isilungiso sesithathu sasilapho, kanye xa iMelika yayimdinga kakhulu https://t.co/Mi2fb0Efrg
-Ubabalo lwePanetta (@grace_panetta) Nge-5 kaJuni 2020
Ndiziva njani xa ulungiso lwesithathu olungathandwa kwaphela lusetyenziswa. UJames Madison umele namhlanje #iikota pic.twitter.com/S6YjGMoCXE
-KFall (@ kfall16) Nge-5 kaJuni 2020
lupita nyong'o no danai gurira
Isihlomelo sesithathu sihamba kwi-Twitter.
UJames Madison: pic.twitter.com/MB6GQm6Eib
-Arizona (@arizonagarbage) Nge-5 kaJuni 2020
Ngaba umntu othile wasikhupha nje isiTshintsho sesithathu njengesixhobo sokhokho esafunyanwa ngaphakathi kwetempile eyomeleleyo https://t.co/GIt2l00mUu
-Laura Hudson (@laura_hudson) Nge-5 kaJuni 2020
Kwaye oku, zihlobo zam, yiyo loo nto uMgaqo-siseko ubalulekile.
(umfanekiso: Mario Tama / Getty Izithombe)
Iintsomi Zetempile Efihliweyo
Ingelosi Miguel Soto
iimbali zetempile efihliweyo
ingonyama 4 enye indawo yokuphela komoya
ikratshi kunye nomkhethe kunye neZombi iimpahla
I-avatar yomoya wokugqibela s1e10
ukapteni phasma ukwanda kwesibhakabhaka